I-Sex Morning: IiNzuzo kunye neNdawo
Ubulili besasa kuhle kakhulu ukuba unokuva iifowuni ze-psychotherapist, i-sexologist kunye nabalandeli besondo sekusasa imihla ngemihla: "Ukuba ufuna ukuhlala unempilweni, inhle kwaye incinci ixesha elide kunokwenzeka, yenza isondo ekuseni! Ngezansi iinjongo zesondo sangasese, unako Ungazibopheli kubo, kodwa ubuncinci cinga nje.
Ukwabelana ngesondo ekuseni kukunceda. Ngale ndlela unokutshintsha ukusetyenziswa kwentsasa, kuba xa sithatha ngesondo, sinamaqela onke omzimba omzimba.
Kulula kakhulu ukuqonda i-gymnastics yocansi, kuba kuyimfuneko ukuqala ukufunda i-yen - wonke umntu unokukwenza oku. Ukongeza, le ndlela ikuvumela ukuba ugcine ukuvumelana ngokufanayo kwenkqubo ejoliswe ngokukodwa.
Ngombulelo wesini sangasese, ufumana ukusilalisa zonke izitho zangaphakathi kwaye uqeqesha onke amaqumrhu omzimba. Ngoko unokunciphisa ingozi yesifo senhliziyo ngesigamu, ngaphezu koko, lo xinzelelo lwegazi oluqhelekileyo. Iingcali zibonise ukuba ukulala ngesantya kuyindlela enamandla yokulwa ne-migraine.
Abasetyhini abelana ngesondo ekuseni, banengxaki yokudandatheka kuninzi kangangoko, kodwa abalimi abakhetha ukulala ngesilwanyana, banokuxhathisa imeko.
I-Advantage kwisicwangciso se-hormonal. I-hormone yamadoda e-Testosterone isesigxina esisisigxina ukusuka ngo-7 ukuya kwe-8.
Ngamahlandlo amabini ngosuku, i-biorhythms iyahambelana nokubonakala kwesifiso sesondo sabasetyhini kunye namadoda. Eli xesha li-8 ngomhla no-8 ntambama. Kungoku ngeli xesha ukuba iindoda zamadoda kunye neendoda zokuziphatha ngokwesini zifikelela kwindawo ephakamileyo ngexesha elifanayo. Eli xesha lemihla lilungele ukutshata, kuba zombini amaqabane atshabalalisa amandla.
Ukususela kusasa kumntu ozele i-vivacity, amandla kunye nemikhosi, ngoko-ke isondo siya kuhlaselwa kwaye siphile, kunokuba kusihlwa emva kosuku olunzima.
Ukwabelana ngesondo ekuseni kuvuselela usuku lonke, kuba i-endorphins iveliswa - i-hormone yolonwabo.
Ukuba uthe walala ngesantya, kuthetha ukuba imini yonke uya kuziphatha ngokugqithiseleyo kwaye uxolo kunabasebenzi bakho.
Emva kwesondo sasekuseni, wena usuku lonke uvakalelwa kakhulu kwaye ukhumbule ukuba unayo i-sutra.
Ngentsasa, unokwenza ulwalamano lwakho olusondeleyo.
Kungcono ukunyuka ngesondo kunokusebenza, okufuneka ukhawuleze.
Kutheni kudala ukuxabana? Oku kucacile ukuba kukho inzuzo eninzi. Nangona kukho enye intengiso, ngaba awufuni ukuzama ukwenza oko kusasa?
Ngesizathu esithile, wonke umntu ucinga ukuba ukulala ngesondo kusasa kunomntu onokuzonwabisa. Kwaye isiqingatha esihle asiyithandi nhlobo. I-Noete abaninzi abesifazana abaphucukileyo kusasa baya kuba nesondo kunokupenda ipeyinti yokulwa, kuba kusasa banomsebenzi okhethekileyo wokuvakalelwa.
Kufana nemfihlakalo. Ndiyazibuza ukuba kutheni xa indoda kunye nomfazi beqala ukudibana, bakulungele naphi na apho befuna ukulala ngesondo. Kodwa emva kwexeshana, ukuvumelana oku kudlulayo: ufuna kuphela ukulala ngesantya, kwaye ke ngokuhlwa kuphela. Inokwenzeka ukuba, akayi kucinga ngokudlala ngothando naye xa echeba. Yaye ufuna ukuhlala ecaleni kwakhe, ngelixa emela ngesibuko kwaye ngokukhawuleza apepese i-eyelashes yakhe. Ukuba uthetha ngokungafaniyo, ukuxabana kuphuma.
Konke kuxhomekeke kwi-biorhythms - umntu uzinxulumana neenkuku okanye iilaki. Ukuba isiqhwenga satshatyalaliswa ngokukhawuleza i-lark, ngoko umntu akanakumangaliswa ukuba i-biorhyth yabo ayihambisani. Ukongezelela, kukho ezinye izinto ezininzi ezichaphazela umnqweno kunye nesondo. Ubuninzi babantwana, uxinzelelo, ukukhathala - oku kukuthintela kwaye kuyigxotha kwimvelaphi. Ukuba umfazi kaninzi ubusuku busukuma kumntwana okhalayo, xa umyeni wam enxantathu ekhongweni, ke ukuba kuyimfuneko ukuba amangaliswe ukuba uya kukhwela kwindoda yokusa? Kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuhlale kunokwenzeka ukuvumelana ngokungqinelani, into ephambili kukuba kukho umnqweno.
Iingxoxo kunye neenkcukacha
Xa ilanga liphuma, i-penis yindoda yenza loo nto. Ukuba awukholelwa kuyo, khangela ukuba kusasa kusasa. Oku kubangelwa kukuba kwintambama inqanaba le-testosterone egazini lomntu lifikelela kwindawo ephakamileyo. Kodwa kukho esinye isizathu salokhu. I-Erectile nererve ilapha ngeenxa ye-prostate gland, efumaneka phantsi kwesibhambathiso. Wonke umntu uyazi ukuba kusasa i-bladder igcwele, kwaye ukusuka kule pensi iphakama.
Ngentsasa, musa ukulala ngesondo esilula. Kodwa unomdla omkhulu kunye nomnqweno. Kukho ezininzi iingxabano ezinokuthi zihanjiswe ngothando lwesondo. Ngoku uya kubona kuphela isiseko, ngaphezu koko uza kufunda i-sex best best in the morning.
Musa ukuva ukuba uyathandwa kwaye ufuna. Ukwabelana ngesondo ekuseni kukuqala kosuku olungcono. Nina bobabini baya kufumana amandla namandla.
Vumela uthando lwakho luvuke emoyeni. Yazi, ukuba usuku lwakho luqala ngokubonisa uthando, ke le mvakalelo iza kuwufihla yonke imini, kwaye abantu baya kufikelela kuwe. I-Wambudto iya kuba sehlombe. Iingxaki kunye nobunzima ziya kuxazululwa lula kakhulu. Iingcali zithi izibini ezithandana ngesondo ekuseni zivakalelwa ngokupheleleyo kwaye zinzulu.
Ukuba awukho kakuhle kumzimba okanye kwimidlalo, kwaye mhlawumbi ungenayo ixesha elaneleyo, khumbula ukuba i-"simulator" yeyona nto ihamba phambili yindoda esondelene nayo. Esinye isifundo kwi "simulator" esinjalo siya kunceda ulahlekelwe iikhalori ezingamakhulu amathathu uze ufumane ukuzonwabisa.
Ngaba ungephupha ngekhanda elincinci, elincinci leenwele ezibi, ezinempilo? Iimpawu zokungcola zangaphakathi kwinombolo 1 isondo sekusasa, kuba ulwalamano olusondeleyo luvumela i-hormone ukuba iveliswe, kwaye yenza ulusu luvule kwaye izinwele ziphilile kwaye zinamandla.
Kanye kunye nesondo sasekuseni umsebenzi wakho wengqondo kunye nobuchule bokudala buya kuvuka. Emva kokulala kakuhle, indlela engcono yokusinceda sivuke ngesondo sekusasa.
Eyona nto ibangelwa ukulala ngesondo
Ngentsasa, umzimba wethu uphinde ukhululeke, ngoko ke ukhulula ngokukhawuleza, kwaye i-orgasm ininzi kakhulu.
Ukuba indoda yokuqala ivuke ...
Ukunyamezela ngothando intombazana yakho ethandekayo - akunjalo? Umzimba omhle othe wathintela ngokunyanisekileyo, ikhefu elithambileyo okhalweni, ubusuku bokuqala busika - ngoku lixesha lokuqalisa ngenyameko kwisenzo esingcwele.
Ukuhamba kwimihla yokusa kwintsasa yimibuzo ye "spoon". Iqulethe ulwalamano oluninzi kunye nesimo sengqondo. Esi sikhundla sihle kakhulu xa lona wesifazane engakavuli ngokupheleleyo, kwaye indoda isele ikulungele ukukhwehlela. Ukuvusa umntu omthandayo kule ndawo kuyonwaba ngokwenene. Indoda ingemva kwowesifazane, kwaye ubuso bubhekiswe kwicala elinye. Apha, indoda ingena kumfazi ngokukhawuleza kwaye ihamba ngokukhawuleza yenza ukunyakaza, ukulawula ubunzulu bokungena kunye namandla okududuza. Ngokuqinisekileyo izandla zakhe ziyamkela intanda yakhe. Umfazi uya kuqala ukuvuka kwaye mhlawumbi aguqe ngaphantsi, okuya kutshintsha indlela yokungena. Ungakwazi ukutshintsha i-pose - ukuphosa umlenze kwiqabane okanye ukuliphakamisa.
Ukugqwesa ukuba isondo sangasese sisondele ngaphantsi kwe-sissy pose. Ibhinqa lilele kwisisu, kwaye i-pelvis iphakanyiswa ngokuncedwa ngumsila. Nabani na umntu obona into enjalo akufanele nje abe nemihlali, kodwa alahlekelwe yintloko. Kodwa musa ukukhawuleza. Makube bhetele kuya kubakho ukunyakaza kunye nobumnene-kude kube loo ntokazi ivuke.
Ukuba umfazi wokuqala wavuka ...
... kuthetha ukuba akufanele ucinge ixesha elide. Ngenxa yokuba into ebaluleke kakhulu yokuzonwabisa yakho iye yavusa phambi kwakho. Ungakwazi ukulula izandla ngokulula uze uqonde ngokucacileyo "umsila". Isiqalo esihle kakhulu semini yindoda yindoda engumzimba. Ngaphezu koko, abaninzi abesifazana bangabesifazana somntu othandekayo njengomntu othile, ngoko awanakuyinyamekela into yokuba loo mntu ngokwakhe ulele, kwaye bayabelana ngothando kunye nokukhawuleza kunye nomxholo wabo ozithandayo. Emva koko, unokuhlala nje "ngehashe" kwaye ulungele ukuhamba ekuseni ngokuhamba ngehashe.
Izabelo zasekuseni zineziphumo kunye neengxaki zayo. Ngokuqinisekileyo, iingxaki eziphambili kukuba ukungabikho kwexesha kunye nobukeka obuhle, kodwa izibonelelo ziseninzi kakhulu.
Zama, kwaye awukwazi ukuphika lo lonwabo.
Ubukhulu besithunzi somntu
Indlela yokukholisa umntu ukuba athathe i-cunnilingus?
Isondo esisebenzayo ngaphandle kwekhondom
Umsebenzi wesondo kubasetyhini
Ubundlobongela beNzululwazi okanye iSayensi kwiSondo
I-orgasm yesini kunye nokulinganisa
Abantu abanobucayi bobulili
Umphathi wabantu: i-pros and cons
Iipencake ezinomsoco kunye neentliziyo ezimnandi: zokupheka zakudala kunye nezokuqala
Isaladi ngeelwimi yengulube
Unokunyamekela njani izitya zetsimbi?
Iiklasi ezinama-dumbbell ekhaya
Unyango lwe-toxoplasmosis kunye nezindlela zabantu
Ikhefu yoNyaka omtsha 2016, iresiphi engcono kunye nesithombe
I-pizza kunye ne-bagels kunye ne-sausage
Indlela yokufundisa umntwana ukufunda nokufunda
UPaul Priluchny noAgata Mutseniets bahlukana? Kwaye ezinye iinkcukacha zobomi bomntu siqu benkwenkwezi
Iilwimi ezihlaziyiweyo zokuphuhliswa kweengcaciso kunye nentetho yabantu abadala
I-Luminotherapy: iipropati, ukusetyenziswa, iimpembelelo kunye nezichaso
Intombazana enokutshatyalaliswa ngobunzima obubunjwa
Ubugcisa bokukhohlisa amadoda
Umlinganiselo wamadoda kubantwana abavela kwi-tube yokuhlola
© 2020 xh.inditics.com